Mahatsiaro ny fanafihan’ny Sovietika an’i Tsekoslaovakia tamin’ny taona 1968 · Global Voices teny Malagasy
Nanao ny tetipanorona isankarazany ny mpikatroka hamelona ny fahatsiarovan'ny daholobe
Voadika ny 14 Septambra 2019 5:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, русский, عربي, Italiano, English
Fiara mifono vy Sovietika ao afovoan-tanànan'i Prague tamin'ny 21 Aogositra 1968. Saripikan'i Václav Bradáč, nahazoana alalana avy amin'ny Ivon-toerana Tseky ho an'ny Fikarohana momba ny fitondrana Jadona.
Famoahana ny zava-nitranga taloha ny tantara, ary nanapa-kevitra hanaiky izany ny olona, hoy i Napoleon Bonaparte indray andro. Ao amin'ny Repoblika Tseky, simba tsikelikely amin'ny tantara fanamelohana nohamafisina hatramin'ny firodanan'ny komonisma tamin'ny taona 1989 ny fomba fijery mifanditra momba ny dikan'ny fanafihana an'i Tsekoslovakia tamin’ny taona 1968 nataon'ny tafika sovietika.
Niahiahy i Moskoa fa mety hanimba ny fanjakazakan'ny Antoko Komonista eo amin'ny fiarahamonina, ary hametraka ohatra ratsy ho an'ny fanafahana ireo firenen-kafa eo ambany fitondran'ny Sovietika any Eoropa Afovoany sy Atsinanana ny fanavaozana ara-politika nitranga tany Tsekoslaovakia tamin'ny taona 1968, antsoina hoe Lohataona Prague. Ny alin'ny 21 aogositra tamin'io taona io, nanafika ny firenena ny tafika sovietika, nampian'ny mpikambana hafa tao amin'ny Dinan'i Varsovia taloha.
Mandra-pahatongan'ny firodanan'ny Firaisana Sovietika, ny fitantarana ofisialy dia ny hoe “noafahan'ny” tafiky ny Dinan'i Varsovia i Tsekoslaovakia rehefa avy lavo tamin'ny teti-dratsy tandrefana hanongana ny governemanta komonista. Noraràna ireo sary na horonantsary mampiseho ny fanoherana ilay antsoina hoe fanafahana, ary potehina raha tratra. Tena mety hidiran-doza ireo tompon'ny antontan-taratasy tahaka izany raha tratra, ka nafenina izy ireo noho izany.
Saingy nampitaina am-bava tamin'ireo fianakaviana sy namana akaiky azo itokisana ny fahatsiarovana ireo fisehoan-javatra ireo. Nanomboka tamin'ny taona 1990, nivezivezy ny fitantarana ofisialy: voamariky ny fandrakofam-baovao be dia be ny ireo fihetsiketsehana tany amin'ireo tanàndehibe tao amin'ny Repoblika Tseky ny 21 aogositra.
Vao haingana kokoa, nanjary mahazatra ny fampirantiana an-kalamanjana momba ireo sary sy horonantsary tsy hita taloha sy matetika nafenina, ary mitohy miparitaka ny angon-drakitra momba ny zava-niseho 51 taona lasa izay: raha mbola tsy fantatra mazava hatrany hoe firy ny olona maty vokatry ny fanafihana, navoakan'ny fikarohana ara-tantara vaovao fa Tseky sy Slovaky 137 no fitambaran'ny maty
Saingy manomboka miseho tsikelikely ny fahavakisan'izany fitantarana izany.
Araka ny fitsapan-kevitra natao tamin'ny taona 2018, tsy mahay mampifandray ny datin'ny 21 Aogositra 1968, sy ny fanafihana sovietika ny 35 isanjaton'ny tanora Tseky eo amin'ny 18 ka hatramin'ny 34 taona .
Indrindra indrindra fa tsy nilaza betsaka momba izany ny filoha mpomba an'i Rosia ankehitriny Miloš Zeman. Niditra tao amin'ny Antoko Komonista Tsekoslaovaky tamin'ny taona 1967 izy, ary nambarany fa voaroaka tamin'ny taona 1970 izy noho ny fanamelohana ny fanafihana 1968. Na izany aza, tamin'ny taon-dasa, izay nanamarika ny faha-50 taonan'ny fanafihana, tsy nety niteny ampahibemaso izy na nankatoa (ny fisian'ny) zava-nitranga.
Toa maneho ny fomba fijerin'ny hevi-bahoaka Rosiana ankehitriny ny fahanginany, izay na tsy mahafantatra na manohana ny fanafihana 1968, araka ny fanamarihan'ny fitsapan-kevitra.
Mampiasa paikady isan-karazany ireo mpikatroka amin'izao fotoana izao mba hitazomana ny fahatsiarovana eo amin'ny fahatsapan-tenan'ny vahoaka, ao anatin'izany ny fanamafisana ireo angona tranainy sy ireo tahirin-tsary, horonantsary sy mozika nanomboka tamin'io vanim-potoana io, ny fampiasana sarintany ifarimbonana, ary ny fampitomboana ny hetsika an-dalambe hamelomana indray ny fahatsiarovana ny tantara ho an'ny tanora.
Tamin'ny herintaona, nikarakara fampiratiana sary 21 avy amin'ireo mpaka sary isan-karazany tamin'ny fanafihana 1968 ny Lapan'ny Tanànan'i Prague, sary niara-naranty voalohany, izay maneho ny herisetra amin'ny fidiran'ny miaramila an-tsehatra, ny fanoheran'ny mponina ao Prague, ary ny halalin'ny krizy ara-politika.
Mitahiry sy manavao ireo tahirin-tsary izay manaporofo ny fitomboan'ny sary misy ankehitriny ny Ivontoerana ho an'ny Fikarohana ny Fitondrana Tsirefesimandidy, fototra fikarohana sy fampianarana
Fiara mifono vy Sovietika tao amin'ny Kianjan'ny Tanàna taloha malaza ao Prague tamin'ny 21 Aogositra. Sary avy amin'i Václav Bradáč, nahazoana alalana avy amin'ny Ivontoerana Tseky hianarana momba ny fitondrana tsirefesimandidy
Mponin'i Praque manodidina ny fiara mifono vy Sovietika. Sary avy amin'i Václav Bradáč, nahazoana alalana avy amin'ny Ivontoerana Tseky hianarana momba ny fitondrana tsirefesimandidy.
Tamin'ny taona 2016, nisy ny horonantsary fohy navoaka mampiseho ny sary hita vao haingana misy ny mponin'i Praque nandoro tanky Sovietika, nanao fihetsiketsehana teny an-dalambe, ary nitangorona nanodidina ny onjam-peo iray izay ho lasa foiben'ny fanoherana. Nanohitra ny sivana ireo mpanao gazety tao amin'ilay onjam-peo ary nampahafantatra ny mponina momba ny zava-nitranga tao an-tanàna mandra-panakatonan'ny Sovietika azy ireo.
Manatanteraka fomba vaovao ihany koa ireo mpikatroka mba hampisehoana ireo hetsika amin'ny fomba mahasarika kokoa ny tanora. Ohatra, mampifangaro sary amin'ny sarimihetsika sy sary miaraka amin'ireo hira Tseky sy Slaovaky malaza tamin'ny vanim-potoanan'ny Lohataona Prague ity horonantsary lava kokoa ity.
Nitàna andraikitra lehibe tamin'izany fotoana izany ny mozika satria namela ny fandefasana hira sy mozika izay ivelan'ny tontolon'ny etika sosialista, sy ahitana singa amin'ny rock, punk, ary jazz tandrefana ny fanavaozana ara-politika. Niato ny asan'reo mpiangaly mozika izay nanohana mivantana ny Lohataona Prague sy nanohitra ny fanafihana 1968 taorian'ny volana Aogositra 1968, na nandeha manontolo tany amin'ny tsy talaky maso.
Hetsika iray hafa ny sarintany an-tserasera mankalaza ireo namoy ny ainy 137 izay lavo tamin'ny andron'ny 21 aogositra, sarintany nampidirin'ny Ivontoerana Tseky hianarana momba ny fitondrana tsirefesimandidy.
Tamin'ny 21 Aogositra 2019, nanao fihetsiketsehana marobe nanerana ny firenena ny antoko politika mpanohitra, ary toy izany koa ny hetsiky ny mpikatroka mba hanamelohana ny fanafihana 1968 sy ny fahanginan'ny mpitondra ambony ao amin'ny governemanta, izany hoe ny filoha Miloš Zeman sy ny praiminisitra Andrej Babiš.
Vondrona iray toy izany ny hetsiky ny olom-pirenena One Million Moments of Democracy, izay nanao fihetsiketsehana goavana indrindra manohitra ny governemanta nanomboka tamin'ny revolisiona Volory 1989 tamin'ny 23 Jiona. Nikarakara diaben'ny olona an'arivony maro izay nanomboka tao amin'ny kianja Wenceslas ao Prague, toerana mahazatra hanaovana fihetsiketsehana sy fahatsiarovana izy androany. Nanome voninahitra ny hetsika 1968 ary koa namely an'i Zeman sy Babiš ny diabe.
Ao amin'ity sary eto ambany ity, manondro ny asa nataon'ny Ztohoven, vondrona mpikatroka izay azo adika hoe “miala aminy” ny anarany, ary koa “tay zato” (nosoratana tamin'ny fomba hafa saingy mitovy fanonona amin'ny fiteny Tseky) ny kilaoty mena. Ny famantarana boribory eo ankavanana indray dia kilalaonteny mampiasa ny anarana voalohan'i Zeman tamin'ny endrika novaina tamin'ilay fitenenana hoe “lelafo ny vodiko” (vyliž mi prdel amin'ny teny Tseky).
Mpanao fihetsiketsehana Tseky ahitana taranaka samy hafa nanatevin-daharana ny diabe nokarakarain'ny hetsika Million Moments for Democracy ho fahatsiarovana ny fanafihana tamin'ny taona 1968. Saripikan'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Nandalo teo anoloan'ny foiben'ny Antoko Komonista Bohemia sy Moravia ny diabe, izay tsy manameloka mazava ny fanafihana ary mandà ny hampiasa ny teny hoe “fibodoana” mba hamaritana ny vanim-potoana taorian'ny volana aogositra 1968 (na dia notazonin'ny Firaisana Sovietika aza ny toby miaramila ao Tsekoslaovakia nanomboka ny taona 1968 ka hatramin'ny taona 1991). Tamin'ny fifidianana parlemantera 2017, nahazo fito isanjaton'ny vato ny antoko.
Nizara tsaoka avy eo ireo mpanao fihetsiketsehana ary nandrisika ny rehetra hametraka hafatra eny amin'ny lalana mba haneho ny hevitr'izy ireo. Eto amin'ny sary eto ambany, daty telo no aseho: 1948, fotoana nifehezan'ny Antoko Komonista an'i Tsekoslaovakia taorian'ny ady, 1968, datin'ny fanafihana, ary 1969, daty nandoroan'ilay mpianatra Tseky, Jan Palach ny tenany mba hanoherana ny fanafihana taona 1968.
Sary avy amin'i Filip Noubel, nahazoana alalana.
Tokony tohizana amin'ny fomba tia mamorona kokoa ny ady ho fahatsiarovana amin'ny taona hoavy raha te-hahafantatra izay nitranga tamin'ny alina iray nanomboka ny 20 -21 aogositra 1968 ny tanora Tseky.
Tantaran'ny Repoblika Tseky farany
30 Desambra 2020Eoropa Afovoany & Atsinanana